Momba anay | Mersen Zhejiang Co., Ltd.
Any amin'ny Zhejiang Changxing, Mersen Zhejiang Co., Ltd. dia mandrakotra faritra 13510m2, ary manana mpiasa 500. Fanondranana eran-tany amin'ny herinaratra herinaratra sy fitaovana mandroso, Mersen dia mamolavola vahaolana vaovao hamahana ny filan'ny mpanjifan'izy ireo manokana hahafahan'izy ireo manatsara ny fizotran'ny famokarana amin'ny sehatra toa ny indostrian'ny angovo, ny fitaterana, ny elektronika, ny simika, ny pharmaceutika ary ny indostrian'ny fizotrany. Mersen Electrical Power dia manome andalana feno amin'ny fuse-limite amin'izao fotoana izao (voltaka ambany, tanjona ankapobeny, voltre medium, semiconductor, miniature ary vera, ary tanjona manokana) sy kojakoja, blouse fuse sy mpihazona, bloc fanaparitahana herinaratra, switch switch tapaka malefaka, avo switch switch herinaratra, ERCU, Fusebox, CCD, fitaovana miaro vonjimaika, filentehan'ny hafanana, bara fitaterana misy laminated, sns.
Mersen dia mikasa ny hisitrika sy hiaraka amin'i Mingrong (Zhejiang Mingrong Electrical Protection Co., Ltd. Hereinafter antsoina hoe Mingrong) dia nanomboka orinasa tamin'ny fiandohan'ny Fanavaozana sy ny fanokafana an'i Shina, niroborobo tamin'ny fisondrotry ny firongatry ny harinkarenan'i Shina, ary nampisondrotry ny foto-kevitra momba ny famokarana mandroso sy fahaizan'ny R&D matanjaka ary ny injeniera avy amin'ny Mersen Group. Taorian'ny fivoaran'ny 40 taona, Mingrong dia manana tolotra vokatra voamarina amin'ny rafitra mahazatra mahazatra, ao anatin'izany ny GB, UL / CSA, BS, DIN, ary IEC. Ny vokatra Mingrong dia amidy amin'ny firenena maherin'ny 50, manompo mpanjifa an'arivony manerantany.
Rafitra fitantanana kalitao tsy misy tomika, ekipa mpitantana tena tsara ary rafitra fiasa mahomby.
Fiaraha-miasa mandresy fandresena, fikolokoloana ny maha-olona, ​​ary andraikitra ara-tsosialy orinasa no tanjonay.
Ny fikatsahana tsy an-kijanona ny hatsarana sy ny faniriana hijanona eo an-tampony no fanahin'i Mingrong.
Miaraka amin'ny fototra mafy orina amin'ny fizarana angovo herinaratra sy ny tsenan'ny indostria, i Mingrong koa dia nandroso ary nanao fandrosoana tamin'ny indostria angovo azo havaozina, toy ny herin'ny rivotra sy ny photovoltaics. Mba hahazoana ny tombontsoa ao amin'ny Politika Vaovao momba ny fotodrafitrasa vaovao, fotoana tokony handehanan'i Mingrong mankany amin'ny toko vaovao amin'ny pirinty manga: hipetraka ao Changxing ary hivoatra ho lasa toeram-pamokarana maoderina, mba hanararaotana tsara ny fampandrosoana ny teknolojia manerantany Mersen harena. Mandritra izany fotoana izany, mbola hanohy hanatsara ny tobin-tsoratry ny famatsiana ao Shina ihany koa izy, ary hanohy ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny indigitalisation, ary ny fametrahana rafitra fiarovana azo antoka, tontolo iainana ary ny kalitao avo indrindra.
Andao atomboka anio